Tsvaga iyo nyowani IBM mainframe ine z13 uye Linux | Linux Vakapindwa muropa
$ 13 bhiriyoni yeiyo zXNUMX mainframe inomhanya Linux
IBM inozivisa nyowani z13 mainframe ine yakakosha mitsva mune yayo Hardware uye kuti ichashanda nekutenda kune inoshanda sisitimu neLinux kernel. Iyo midziyo iri mubvunzo inotsigira 10TB yekumusoro, iyo inobvumira iyo kutsigira inosvika mazana masere emaseva. Mushini chaiwo umo IBM yakashandisa mari inodarika chiuru chemadhora ezviuru uye yakagadzira zvinopfuura mazana mashanu patent mukusimudzira kwayo.
Como John anopfura inovimbisa, mu z13 "kune zvakawanda zvitsva zvinosangana nepuratifomu iyi." Inototanga kubva kusilicon, ine z13 machipisi ane 22nm tekinoroji nekuvandudza mune bandwidth uye nhamba yemirairo yainogona kupedzisa mune imwechete kutenderera, ine SMT yeprosesa musimboti.
John akadzivirirawo z13 kurwisa iyo POWER8, pakati payo pane misiyano mikuru padanho rezvivakwa uye dhizaini, kunyangwe yakave nemimba nekambani imwechete uye inoitirwa supercomputing. Uye kubata processor iyi, ndiani ari nani kupfuura Linux kushandisa simba iri uye kurishandisa. Uye zvakare, matekinoroji e visualization izvo zvichagadzirisa ramangwana reSystem z.
Nhau dzinobuda kunze nguva pfupi yapfuura kupemberera iyo 50 anniversary yeiyo IBM mainframe mumusika, icho chisiri chinhu chete chekufarira, asi chiri kuramba chichisimudzira idzi mhando dzemakomputa emhando yepamusoro kuitira kuti dzirambe dzichishanda nanhasi uye mune ramangwana ...
Uye kune avo vatsva kuchinhu ichi, taura kuti mainframe mhando yekomputa hombe uye ine simba, ine mutengo wakakwira uye kuti uwane kuita kwakanyanya kwazvo. Uye iyo IBM z13 CPU ine zvinotevera features:
Yakagadzirwa nehunyanzvi SOI 22nm neGlobalFoundries (aimbova mafekitori eADD).
Clock frequency 5 GHz
Mirayiridzo yakatarwa z / Rudzi rwekuvaka CISC
96KB yeI-L1 uye 128KB yeD-L1 pamusoro wega zvakavanzika 2MB I-L2 uye 2MB D-L2 pamusoro
3MB Yakabatana L64 Cache (Yakagovaniswa). Yakaitwa mukati eDRAM.
Con GX Bhazi (iyo inotsigirwawo NESIMBA).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » $ 13 bhiriyoni yeiyo zXNUMX mainframe inomhanya Linux
ArchBang 2015.01 inowanikwa yakapusa "Arch Linux"